DHACDO yaab Leh: Malxiisad ku sugan Hargeysa oo Nin Isku Bedashay (Akhriso) siday wax udhaceen! | kowtharmedia.com
Home ARRIMAHA BULSHADA DHACDO yaab Leh: Malxiisad ku sugan Hargeysa oo Nin Isku Bedashay (Akhriso) siday wax udhaceen!
DHACDO yaab Leh: Malxiisad ku sugan Hargeysa oo Nin Isku Bedashay (Akhriso) siday wax udhaceen!
Feb 25, 2017ARRIMAHA BULSHADA, WARAR
Maxkamada magaalada Hargeysa ayaa maanta waxa ay qaadeysay mid kamid ah kiisaskii ugu yaabka badnaa ee ka dhax dhaca dhinaca bulshada, waxa uuna kiiskan yahay mid ay dad badan ka war sugyaaan.
Magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland waxaa dhawaan ka dhacday arin layaab leh oo nuuceeda aan horey loo arag, waxa ayna dhacdadan layaab iyo amakaag ku riday dhamaan dadkii maqlay.
Xaafad katirsan Degmada Axmed Dhagax ee Magaalada Hargeysa waxaa maalmo kahor ku aqal galay wiil iyo gabar xariir uu ka dhaxeeyay , waxa uuna guurkoodu ahaa mid lawada ogaaa oo si caadi ah u dhacay.
Gabadha lasoo guursaday ayaa guriga waxa ay keensatay gabar ay sheegtay in ay saaxiibo yihiin ayna todobo bixineyso maalmaha todobaaka inta lagu guda jiro, hasa ahaatee arinta ayaa noqopn doonta mid gadaal dambe ka fashilanta.
Goob joogayaal ayaa ku waramay in Wiilka arooska cusub ahaa in maalin maalmaha kamid ahaa uu ka baaqsaday shaqadiisa kadib markii uu lasoo darsay xanuun, waxa uuna maalinkaa iska joogay gurigiisa.
Previous PostHaweeney aheyd xaaska mid ka mid ah ajaaniibta ka tirsan Al-shabaab oo la qabtay (Daawo Sawirro) Next PostHowlgallo Maanta ka socda Magaalada Boosaaso kadib markii xali saldhig laweeraray!!